विवाहको उमंग नसकिदै मनोज गजुरेललाई पर्यो ठूलो शोक, भाव विह्वल हुँदै यस्तो भने – Hamro Nepali Samachar
Home/ समाचार/विवाहको उमंग नसकिदै मनोज गजुरेललाई पर्यो ठूलो शोक, भाव विह्वल हुँदै यस्तो भने
काठमाडौ । हाँस्य कलाकार मनोज गजुरेललाई शोक परेको छ । उनले भाई गुमाएका छन् । मामा घरका भाईको निधन भएको उनले लेखेको स्टटासवाट बुझ्न सकिन्छ । आइतवार लामो स्टटास लेख्दै मनोजले भाई प्रति निकै माया दर्साएका छन्। उनको लेखाई निकै भाव विह्वल छ ।
यस्तो छ मनोजको स्टटास, प्यारो भाइ विवेक🌹
तिम्रो भौतिक शरीरबाट निस्किएको आकास तत्व (आत्मा)को अनन्तयात्रा मङ्गलय बनोस् । यदी तत्कालै पुनर्जन्मको योग छ भने फेरीपनि हाम्रै मावली खलकमा जन्म लेउ, हामी प्रतीक्षा गरिरहनेछौँ साने😭हरि ॐ तत्सत् अर्थात् यही नै सत्य हो🙏
माइजू कुन मनोदशाबाट गुज्रिरहनु भएका होला ? दिदीहरुलाई के बितिरहेको होला ? मामा सानिमाहरु दुस्खको कत्रो पोखरीमा डु बे का होलान् ? हामी अत्यन्तै म र्मा हत भएका छौँ कान्छा ! हाम्रा बुबा बि तेपछि आमाले हामीलाई मावली गाउँमा गुँ ड सार्नुभयो । एक प्रकारले भनौं, मावलीघरमा शरण पायौं।